News | Mandalay FM Radio
Mandalay FM Weekend Show for(30.8.2015)[Sunday]
• ပျော်ရွှင်စရာ ''Special Weekend '' ဖြစ်ပါစေ FM ပရိတ်သတ်ကြီးရေ . . .
Read more about Mandalay FM Weekend Show for(30.8.2015)[Sunday]
Mandalay FM Evening Show for (28.8.2015)[Friday]
သောကြာနေ့ကိုရောက်လို့လာပါပြီ။ ညနေ(၄)နာရီမှာ သောကြာနေ့တိုင်း တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Friday Night Panel စကားဝိုင်းအတွက် ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ Rapper နှစ်ဦးရှိပါတယ်။ ရဲနောင် နဲ့ Lil'Z တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Read more about Mandalay FM Evening Show for (28.8.2015)[Friday]
Mandalay FM Morning Show for (28.8.2015)[Friday]
သောတရှင်များအားလုံးပဲ မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါ။ မနက်၆နာရီကနေ၉နာရီအတွင်း အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကျော်ကျော် နဲ့ သက်ပိုင်တို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Mandalay FM နံနက်ခင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်မှာတော့ နောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာ
Read more about Mandalay FM Morning Show for (28.8.2015)[Friday]
Mandalay FM Evening Show for (24.8.2015) [Monday]
ဒီနေ့ မင်္ဂလာညနေခင်းပါ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုစကားဝိုင်း မှာ ညနေ(၄)နာရီကနေ(၇)နာရီအထိ တင်ဆက်သူ ကိုဇာနည် နဲ့ နေနေ တို့က ရေဒီယိုပရိသတ်များနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။
Read more about Mandalay FM Evening Show for (24.8.2015) [Monday]
Mandalay FM Morning Show For (24.8.2015) Monday
မင်္ဂလာရှ်ိလှတဲ့ တနင်္လာနံနက်ခင်းလေးပါရှင့်...သောတရှင်များအားလုံးကို Mandalay FM နံနက်ခင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်။
Read more about Mandalay FM Morning Show For (24.8.2015) Monday
Mandalay Fm Weekend Show For (23.8.2015) Sunday
>ပျော်ရွှင်စရာ ''Special Weekend '' ဖြစ်ပါစေ FM ပရိတ်သတ်ကြီးရေ .
>Mandalay Fm Weekend Show ရဲ အစီအစဉ်ကောင်းများစွာက မိသားစုအစုံအလင် နားဆင်ဖို့ နေ့လည် 11:00 မှ ညနေ 4:00 အထိ (5) နာရီစာ ကဏ္ဍမျိုးစုံ နဲ့  ရှိနေမှာပါ
Read more about Mandalay Fm Weekend Show For (23.8.2015) Sunday
Mandalay Fm Weekend Show For (22.8.2015) Saturday
>Mdy.Fm ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် Mdy.Fm Weekend Show ရဲ့  ဒီတစ်ပတ်အတွက် တိုက်ရိုက်တင်ဆက်မှု က အလှည့်ကျလာပါပြီနော်
Read more about Mandalay Fm Weekend Show For (22.8.2015) Saturday
Mandalay FM Evening Show For 21.08.2015 [Friday]
ဒီနေ့ သောကြာနေ့ မင်္ဂလာညနေခင်းပါ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုရေဒီယိုစကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာညနေ(၄)နာရီကနေ(၅)နာရီအတွင်း အဆိုတော် ကေကေမိုး နဲ့စကားဝိုင်းအပြင်၊သူမတိုက်ရိုက်သီဆိုပြမယ့် သီချင်းလည်း နားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။
Read more about Mandalay FM Evening Show For 21.08.2015 [Friday]
Mandalay FM Morning Show For (21.8.2015)( Friday)
မင်္ဂလာရှိလှ တဲ့ သော ကြာနေ့ လေးပါ ရှင့်......သောတရှင်များအားလုံးကို Mandalay FM နံနက်ခင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှု အစီအစဉ် ကနေကြို ဆိုပါတယ်။မနက်ခင်းနေ့သစ် စတင်လိုက်တိုင်းသောတရှင်များဆီ
Read more about Mandalay FM Morning Show For (21.8.2015)( Friday)
Mandalay FM Evening Show For 20.08.2015 [Thursday]
မန္တလေး FM ရေဒီယိုပရိတ်သတ်ကြီးရေ...ဒီနေ့ ကြာသာပတေးနေ့ရဲ့ မင်္ဂလာညနေခင်းပါတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုရေဒီယိုစကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကတော့ညနေ(၄)နာရီကျော်မှာ အဆိုတော် G Fatt ပါ နဲ့တွေ့ဆုံမယ်၊သူ့ရဲ့ဂီတလှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းမေးပြီး၊
Read more about Mandalay FM Evening Show For 20.08.2015 [Thursday]
Global New Wave Technology